သတင်း - လိင်တံလက်စွပ်အတွက်အချက်အချို့
လိင်တံလက်စွပ်ကိုများသောအားဖြင့်လိင်တံကိုပိုမာပြီးပိုရှည်လာစေရန်၎င်းကိုအချိန်ကြာကြာထိန်းထားရန်နှင့်အော်ဂဇင်ကိုမြင့်ရန်နှင့်ကြာရှည်စေရန်သုံးသည်။ လိင်တံကွင်းသည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်လိင်တံ၏သွေးကိုထိန်းပေးသည်။ ၀ တ်ဆင်သူတစ် ဦး သည်နောက်ဆုံးတွင်သုက်လွှတ်သည့်အခါလိင်ဆက်ဆံရန်ပိုကြာလာသည်နှင့်လိင်တံတွင်နောက်ထပ်သွေးများပြည့်နေသောကြောင့်အာရုံခံစားမှုကပိုပြင်းထန်လာသည်။
၃။ glans နောက်သို့တိုက်ရိုက်
ရာထူးတစ်ခုစီသည်တစ် ဦး ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်၊ ဝှေးစေ့ပတ်လည်၌ ၀ တ်ထားသောလက်စွပ်သည်အော်ဂဇင်ကိုနှောင့်နှေးစေပြီးပိုမိုပြင်းထန်စေသည်။ ဒါပေမယ့်လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာမတူညီတဲ့အာရုံခံစားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံကိုဖန်တီးပြီးမတူညီတဲ့ရာထူးတွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
သတိပေးချက်: သင်အလွယ်တကူသွေးထွက်ခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိလျှင်သို့မဟုတ်အရံသွေးကြောသို့မဟုတ်အာရုံကြောရောဂါတစ်ခုခုခံစားနေရပါကလိင်တံကွင်းကိုမသုံးပါနှင့်။ သင်က coagualants ဆန့်ကျင်ဆေးများ၊ အက်စပရင် (သို့) အခြားသွေးကျဲဆေးများသောက်နေလျှင်ဤအရုပ်များကိုမသုံးပါနှင့်။ နာကျင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း (သို့) အာရုံခံစားမှုပျောက်ဆုံးခြင်းအပါအ ၀ င်ပုံမှန်မဟုတ်သောခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်ပါကချက်ချင်းအသုံးမပြုဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေးပါ။၎င်းကိုမိနစ် ၃၀ ထက်ပိုမဝတ်ရန်အကြံပြုသည်.
အချို့သူများသည်ကွန်ဒုံးကိုရွေးချယ်ရသကဲ့သို့အရွယ်အစားကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ p အဖြစ်enis လက်စွပ်များကိုအရွယ်အစားနှင့်ပစ္စည်းများမြောက်များစွာတွင်ရနိုင်သည်သတ္တု၊ ရာဘာ၊ ပလပ်စတစ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် TPE ကဲ့သို့. ငါတို့အတွက်၊ ငါတို့ကကွင်းတွေအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် TPE နဲ့နူးညံ့တဲ့ဆီလီကွန်ပစ္စည်းကိုအမြဲပံ့ပိုးပေးတယ်။ သူတို့ကဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် စူပါ ဆွဲဆန့်နိုင်သောပစ္စည်း ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်တံအရွယ်အစားအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ မတူညီသောကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများအတွက်သင်များစွာဂရုစိုက်ပါက HS007S ကို set တစ်ခုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား ၃ မျိုးပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်သင်စတင်နိုင်ပါသည် အကြီးနှင့်ပထမ၊ ထို့နောက်အငယ်။ ပိုအဆင်ပြေပြီးအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရအောင်ရှာပါ။
လိင်တံလက်စွပ်ပျက်စီးသောအခါ ၎င်းသည် အသုံးပြုd ကွန်ဒုံးနဲ့လား။
မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး ဘာလုပ်မလဲ မည်သည့်ထိခိုက်နစ်နာမှုကိုမဆိုကူညီနိုင်သည်. ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကကွန်ဒုံးကိုဝတ်ပြီးတော့လက်စွပ်ကိုဝတ်ရင်အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် တင်းကျပ် ကွန်ဒုံးကိုသေချာစစ်ပါ ပိုလုံခြုံတယ် ကိုင်။
သင်မှန်ကန်စွာသုံးလျှင်လုံးဝမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် it ၀ ယ်တဲ့အခါမှာအရည်အသွေးကောင်းတွေကိုဂရုပြုဖို့အရေးကြီးတယ်။ ၎င်းသည်ဆွဲဆန့်သင့်သည်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မီဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဆိပ်အတောက်များကင်းစင်သည်non-phthalateမရ။ ပလပ်စတစ် / ရော်ဘာနှင့်ဝေးဝေးနေပါ၊ ပါ ၀ င်သောပလတ်စတစ်ဆာဂျင်များသည်သင်၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောအန္တရာယ်ရှိသောအရာဖြစ်သည်။ Greebaby သည်ကွင်းအားလုံးအတွက် FDA အဆင့် silicone နှင့် body-safe TPE တို့ကိုအမြဲထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် www.greenbabyfactory.com မှ ၀ ယ်ယူရန်နှင့်အကြံပြုရန်လွယ်ကူသည်